Xildhibaan Cabdifitaax: Hab-dhaqanka Dowladda waa aargoosi – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdifitaax: Hab-dhaqanka Dowladda waa aargoosi
Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir ayaa ku eedeeyey Hogaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) inuu hab-dhaqankiisu yahay mid ku saleysan “aargoosi”, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay inuu doonayo inuu cambaareeyo hab-dhaqanka uu siiyey sifahaas. “Waa hab-dhaqan qofkii maalin dowladda sidaa u jaleecay iyo qofkii is yiri toosi, oo wax ka sheeegay laba gelin lagala boodayo” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax.
Xildhibaanku, isaga oo iskudayaya inuu sal u yeelo eeddeyntiisa, ayuu soo qaatay dhacdooyin hore. “Qof kasta oo Kambaala Akood (Hishiiskii Kambaala) wixii la oran jiray ay meel uun ka soo gashay waa la weeray” ayuu yiri Cabdifitaax. “Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo ahaa hogaamiyihii mucaaradka ee markaas joogay, waad og tihiin oo aargoosiguusu waxay noqotay in gurugiisa lagu weeraro” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Eryaddii Wakiilka Qarmada Midoobay ee Soomaaliya, Nicholas Haysom, ayuu sheegay iney tahay tusaale kale oo, sida uu sheegay, muujinaya inuu hogaanka dalku dakaneynayo ciddii uu ka maqlo wuxuusan dooneyn. “Dadka Soomaaliyeed maaha in lagu qaldo Madax-banaanida Soomaaliyeed baa la ilaalinaya” ayuu yiri Xildhibaanku.
Xildhibaan Cabdifitaax waxa uu sheegay in waxa dadka, ay dowladdu qoonsatay oo dhan, lagu haysto ay tahay iney ra’yigooda cabireen, ama ay dood/su’aal ka keeneen si ay dowladdu dhaqantay. “Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Yuweeri Musafani ayuun baa haray dadka laga aargoosanayo” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax.
Xildhibaanku waxa uu ku baaqay in ay dowladdu bedesho hab-dhaqanka uu sheegay inuu leeyahay hogaankeeda. “Waxaanu rabnaa in hab-dhaqankaa la baddelo, oo sharciga lagu soo noqdo” ayuu Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir ku yiri qudbad uu shalay ka jeediyey munaasabad uu Muqdisho ku lahaa xisbigiisa UPD.
Xasan Sh. Maxamuud: Hogaanka Sare ee Dowladda kuma tashan in dadka la dhibo
Wasiirka Dastuurka oo yiri “waa inuu hawl-gab noqdaa Madxaweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud”